Iimpendulo, iMasters kunye neMahatmas
Khangela iiAdwords, iiMasters kunye neeMajmas edit editals
I-ADEPTS, AMADODA NE-MAHATMAS.
Umqu. I-9 No. 4
Umqu. I-9 No. 5
Umqu. I-9 No. 6
Umqu. I-10 No. 1
Umqu. I-10 No. 2
Umqu. I-10 No. 3
Umqu. I-10 No. 4
Umqu. I-10 No. 5
Umqu. I-10 No. 6
Umqu. I-11 No. 1
Umqu. I-11 No. 2
Umqu. I-11 No. 3
Umqu. I-11 No. 4
Umqu. I-11 No. 5
Umqu. I-11 No. 6
Xa udlulile mahat, ma uya kuba ngu-ma; kodwa ma uya kudityaniswa mahat, kwaye ube mahat-ma.
Vol. 9 JULAYI, 1909. 4
LA NGAMAZWI ebesetyenziswa ngokubanzi iminyaka emininzi. Ezi zibini zokuqala zivela kwisiLatini, ezokugqibela zivela kwiSanscrit. Isimamva ligama ebelisetyenziswa ngokuvakalayo kangangeenkulungwane ezininzi kwaye lisetyenziswe ngeendlela ezininzi. Yayisetyenziswa ke ngendlela ethile ngabachwephesha beendaba, abathi xa besebenzisa eli gama, kwakuthetha umntu owayezuze ulwazi lobugcisa bobuchwephetsha, kwaye owayenobuchule ekusebenzeni kwe-alchemy. Ukusetyenziswa okuqhelekileyo, eli gama lalisetyenziswa kuye nakubani na owayenobugcisa kubugcisa bakhe. Igama elithi master lasetyenziswa ngokuqhelekileyo ukusuka kumaxesha angaphambili. Ithathwe kwimagnethi yesiLatin, umlawuli, kwaye isetyenziswe njengesihloko ukubonisa umntu owayenegunya kwabanye ngenxa yesizathu somsebenzi okanye amandla, njengentloko yosapho, okanye njengomfundisi-ntsapho. Inikwe indawo eyodwa kwisigama sama-alchemist kunye nama-rosicrucians wamaxesha eendaba njengegama elithetha ukuba ngubani obeyingcali yesifundo sakhe, kwaye wayenakho ukwalathisa kwaye afundise abanye. Igama elithi mahatma ligama leSanscrit, intsingiselo eqhelekileyo yokuba ngumphefumlo omkhulu, ukusuka maha, omkhulu, kunye ne-atma, umphefumlo, obuyela kumawakawaka eminyaka. Ayikabikho, nangona kunjalo, ibandakanyiwe kulwimi lwesiNgesi ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ngoku inokufunyanwa kwi-lexicons.
Isigama mahatma ngoku sisebenza kwilizwe laso lokuzalwa kuye nakubani na othathelwa ingqalelo mkhulu ngomphefumlo njengefakirs yaseIndiya kunye ne yogis. Kwimo yophando, igama lihlala lisetyenziswa kwabo bathathelwa ingqalelo njengabokufumana inqanaba eliphezulu lokwamkelwa. Ke la magama sele esetyenziswa ngokufanayo kumakhulu amawaka eminyaka. Intsingiselo eyodwa inikiwe kubo kule minyaka ingamashumi amathathu anesihlanu idlulileyo.
Ukusukela ekusekweni kombutho i-Theosophical Society e-1875 eNew York nguMadam Blavatsky, la magama, kusetyenziswa yena, acinge ngandlela ithile eyahlukileyo kunye nentsingiselo ecacileyo kunangaphambili. U-Madam Blavatsky wathi wayeyalelwe ngama-adepts, iinkosi okanye ii-mahatmas ukuba zenze uluntu ngenjongo yokwazisa kwihlabathi jikelele malunga neemfundiso zikaThixo, indalo kunye nomntu, ezo mfundiso umhlaba bezilibele okanye bengazi. U-Madam Blavatsky wathi, i-adepts, ii-masters kunye ne-mahatmas awayethetha ngayo yayingamadoda anobulumko obuphezulu, ababenolwazi ngemithetho yobomi nokufa, kunye nezinto zendalo, nabakwaziyo ukulawula amandla Ubume bendalo kunye nokuveliswa kwemeko ngokomthetho wendalo njengoko benqwenela. Watsho ukuba ezi nkolelo, iinkosi kunye mahatmas awafumana ulwazi kuzo ziseMpuma, kodwa ke ukuba zibekhona kuwo onke amazwe ehlabathi, nangona kungaziwa eluntwini ngokubanzi. Ngapha koko kwathiwa ngu-Madam Blavatsky ukuba zonke ii-adepts, ii-masters kunye nee-mahatmas zazingamadoda okanye, ngokudala nangokuthi ngokuzama ngokuzama baphumelele ekumelaneni, ngokulawula nokulawula indalo yabo ephantsi kwaye babenakho kwaye bekwenza ngokwazi Nobulumko ababufumeneyo. Kwi-Theosophical Glossary, ebhalwe ngu-Madam Blavatsky, sifumana oku kulandelayo:
“Ukwamkelwa. (Lat.) Adeptus, 'Lowo ufunyenweyo.' Kwinkqubo yobugqi umntu ofikelele kwinqanaba lokuqalisa, abe nguMlawuli kwisayensi yentanda-bulumko ye-Esoteric.
"Mahâtma. Lit., 'umphefumlo omkhulu.' Isamkelo somyalelo ophakamileyo Abantu abakhulileyo abathi, bakuba bevumile ukuzilawula ngenxa yemigangatho yabo ephantsi, bahlala bengaqondanga 'yinyama,' kwaye banolwazi namandla ahambelana nenqanaba abafikelele kulo ekuguqukeni kwabo ngokomoya.
Kwivoluvo le "Theosophist" nelithi "Lusifa" ngaphambi kwexesha le-1892, uMadam Blavatsky ubhale kakhulu ngokubhekisele kwi-adepts, masters kunye mahatmas. Ukusukela ngoko uncwadi oluqwalaselweyo luphuhlisiwe kusetyenziswa uMbutho weTheosophical kwaye apho kusetyenziswa uninzi lwala magama. Kodwa iBlavatsky ligunya kunye nobungqina phambi kwehlabathi malunga nobukho bezidalwa awayethetha ngabo njengee-adepts, masters kunye ne-mahatmas. La magama asetyenziswe ngoososophists kunye nabanye ngendlela eyahlukileyo kunentsingiselo abanikezwe yona nguBlavatsky. Siza kuthetha ngayo kamva. Bonke abo, nangona kunjalo, abadibeneyo kwaye bamkela iimfundiso ezinikwe nguye kwaye emva koko bathetha kwaye kamva babhala malunga nokuvuma, iinkosi kunye nama-mahatmas bavuma kolwazi lwabo ngaye. U-Madam Blavatsky ngeemfundiso nangezibhalo zakhe unike ubungqina bo mthombo wolwazi ovela kuzo iimfundiso ezaziwa ngokuba yi-theosophical.
Ngelixa uMadam Blavatsky kunye nabo baye bayiqonda imfundiso yakhe babhala malunga nee-adepts, ii-masters kunye ne-mahatmas, akubangakho ngcaciso ichanekileyo okanye ulwazi oluthe ngqo olunikeziweyo ngentsingiselo ethile nganye eyahlukileyo kolunye lwa magama, okanye malunga nenqanaba kunye namanqanaba ezi zidalwa zizalisa indalo. Ngenxa yokusetyenziswa okwenziwe ngamagama ngu-Madam Blavatsky kunye noMbutho we Theosophical, la magama ke sele amkelwe abanye abathi, uninzi lwe-theosophists, basebenzise amagama njengamagama ngendlela efanayo kwaye bedidekile kwaye bengakhethi. Ke kukho isidingo esoloko isanda solwazi lokuba ngubani na kwaye la magama athetha ntoni, ntoni, phi, nini, njani,
Ukuba kukho izinto ezinje ngee-adepts, ii-masters kunye nee-mahatmas, emva koko ziya kuhlala kwindawo ethile kunye nenqanaba lokuzivelela kwezinto, kwaye le ndawo kunye nenqanaba kufuneka lifumaneke kuyo yonke inkqubo okanye isicwangciso esisebenzisana kakuhle noThixo, indalo kunye noMntu. Kukho inkqubo enikezwe ngendalo, isicwangciso saso emntwini. Le nkqubo okanye isicwangciso saziwa ngokuba yi-zodiac. I-zodiac esithetha ngayo, nangona kunjalo, ayingawo amaqela eenkwenkwezi emazulu eyaziwa ngeli gama, nangona le mifanekiso ilishumi elinanye ifanekisela i-zodiac yethu. Kwaye asithethi zodiac ngokwendlela elisetyenziswa ngayo ngabavumisi ngeenkwenkwezi. Inkqubo ye-zodiac esithetha ngayo ichaziwe kumanqaku amaninzi ahleliweyo avela kwi "Lizwi."
Iya kufunyanwa ngokujonga kula manqaku ukuba i-zodiac ifuziselwe sisangqa, yona ke ime endaweni yomqolo. Isangqa sahlulwe ngumgca othe tyaba; icala elingasentla kuthiwa limela izinto ezingabonwanga kunye nesiqingatha esingezantsi sendalo ebonisiweyo. Iimpawu ezisixhenxe ukusuka kumhlaza (♋︎) ukuya kwi-capricorn (♑︎) ngezantsi komgca othe tyaba zinxulumene nendalo ebonisiweyo. Iimpawu ezingaphezulu komgca othe tye ophakathi ziimpawu zommandla ongadalwanga.
Indalo ebonisiweyo yeempawu ezisixhenxe zahlulahlulwe zangumhlaba ezine okanye imigangatho ethi iqale ngezantsi, ibeyindawo yomzimba, eye-astral okanye yengqondo, yengqondo neyendawo zokomoya okanye zehlabathi. Ezi zinto zehlabathi ziqwalaselwe ngokwembono yoqobo kunye nokuvela kwezinto. Ilizwe lokuqala okanye inqanaba elibiziweyo libukho bokomoya, esemgceni okanye kwiplanethi, umhlaza-capricorn (♋︎-♑︎) kwaye kwimeko yawo yokucaphuka lihlabathi lomphefumlo, umhlaza (♋︎). Okulandelayo lihlabathi lobomi, i-leo (♌︎); elandelayo lilizwe lefom, virgo (♍︎); kwaye elona lizwe lisezantsi ngokwesondo ngumzimba, libra (♎︎). Esi sisicwangciso sokungasebenzi kakuhle. Ukupheleliswa kunye nokugqitywa kwezi zinto zomhlaba kubonakala kwizinto zazo zokuzivelela kwezinto. Iimpawu ezihambelana kwaye zizalise ezi zikhankanyiweyo yi-scorpio (♏︎), sagittary (♐︎), kunye ne-capricorn (♑︎). I-Scorpio (♏︎), umnqweno, kukufunyanwa kufikeleleka kuhlobo lwehlabathi, (♍︎-♏︎); ingcinga (♐︎), lulawulo lwehlabathi (♌︎-♐︎); Ubuntu, capricorn (♑︎), kukuphelela kunye nokugqibelela komphefumlo, ilizwe lomoya (♋︎-♑︎). Umhlaba wokomoya, wengqondo kunye ne-astral ulingano kwaye ulinganisiwe ngaphakathi nangokomhlaba wenyama, libra (♎︎).
Umhlaba ngamnye unezidalwa ezizaziyo ukuba zikwindawo ethile yazo kwaye zihlala kuzo. Ngokubambekayo, izidalwa zomoya wokuphefumla, zobomi behlabathi, ezo zikwimo yomhlaba, kunye nezo zikwimeko yokoqobo nganye ziyalazi ilizwe elithile, kodwa udidi ngalunye okanye udidi lwehlabathi lwalo alunjalo okanye alwazi yalawo akweliphi na elinye ilizwe. Umzekelo, umntu okwenyama ngokungqongqo akazazi neempawu ze-astral ezingaphakathi kuye kwaye ezijikeleze yena, okanye kwinqanaba lobomi ahlala kulo kwaye elidlulela kuye, nangomoya wokuphefumla omnikayo. ubuntu obahlukileyo kunye nangokuthi Zonke ezi zinto zomhlaba kunye nemigaqo ingaphakathi nangaphandle komntu wenyama, njengokuba zinjalo ngaphakathi kwaye zijikeleze umhlaba wenyama. Injongo yokuvela kwezinto kukuba onke la mazwe kunye nemigaqo yawo yobukrelekrele kufuneka alungelelaniswe kwaye enze ngengqondo yomzimba womntu, ukuze umntu ngaphakathi komzimba wakhe wenyama abe nokuzazi zonke izinto zomhlaba obonakalisiweyo kwaye abe nakho ukwenza ngengqondo kuyo nayiphi na okanye zonke izinto zehlabathi xa wayesemzimbeni wakhe wenyama. Ukwenza oku ngokuqhubekayo nangokuqhubekayo, umntu kufuneka azenzele umzimba weli lizwe liphela; umzimba ngamnye kufuneka ubesisixhobo sehlabathi esiya kusebenza kuwo ngengqondo. Kwinqanaba langoku lokuvela kwendalo, umntu unaye ngaphakathi kwakhe imigaqo ebizwe ngegama; Oko kukuthi, ngumphefumlo womoya ngokuphefumlisa ubomi ngendlela eqinisekileyo ngaphakathi komzimba wakhe obambeleyo. Kodwa uyazi umzimba wakhe wenyama kuphela, kunye nomhlaba wenyama kuphela kuba engazinzanga umzimba osisigxina okanye ifom. Uyawazi umhlaba wenyama kunye nomzimba wakhe wenyama ngoku ngoba uyasebenza kumzimba wenyama apha nangoku. Uyawazi umzimba wakhe wenyama ukuba uhlala ixesha elide kwaye ungasaphili; kwaye njengokuba umhlaba wenyama kunye nomzimba wenyama ulilizwe nje kwaye umzimba ulungelelanisiwe kwaye ulungelelene, ke ngoko, akakwazi ukwakha umzimba wenyama ukuba uhlale ngokutshintsha kwexesha. Uyaqhubeka nokwakha imizimba eyomzimba enye emva kwenye ngokuphila ubomi obumbaxa, kwaye ekufeni kwakhe ngamnye uya kwimeko yokulala okanye ukuphumla kwifomu yehlabathi okanye kwihlabathi leengcinga ngaphandle kokulingana imigaqo yakhe kwaye wazifumana. Uza kwakhona esenyameni kwaye uyakuqhubeka nokuza emva kobomi ade azenzele indawo yomzimba okanye imizimba engengokwasemzimbeni, apho anokuhlala khona ngesazela ngaphakathi okanye emzimbeni.
Uluntu ngoku luphila kwimizimba yenyama kwaye lwaziwe okwenyama kuphela. Kwixa elizayo uluntu luya kuhlala lukhona kwimizimba yenyama, kodwa amadoda aya kukhula aphile ngokwaseluntwini kwaye azazi zonke izinto zomhlaba njengoko esakha umzimba okanye ingubo okanye isambatho okanye anokuthi ngaso asebenze kuloo mhlaba.
Isichazi magama, inkosi kunye mahatma zimele amanqanaba okanye izidanga zelinye ilizwe lesithathu. La manqanaba aphawulwa ngokwamanqanaba ngemiqondiso okanye iisimboli zesicwangciso sendalo iphela zodiac.
Isimamva ngumntu ofunde ukusebenzisa iimvakalelo zangaphakathi analogous kuleyo yeemvakalelo ezibonakalayo kwaye onokuthi enze ngaphakathi nangaphakathi kwiimvakalelo zangaphakathi kwihlabathi leefom kunye neminqweno. Umahluko kukuba umntu wenza ngokwamachaphaza akhe kwivenkile yenyama kwaye eqonda ngokubona kwakhe izinto ezibonakalayo kwiimvakalelo ezibonakalayo, isichazi sisebenzisa amandla okubona, ukuva, ukuhoya, ukunambitha nokuchukumisa kwihlabathi leefom kunye neminqweno, kwaye nangona iifom kunye neminqweno zingenakubonwa okanye zivakalise umzimba wenyama, ngoku uyakwazi ngokukhulisa kunye nokuphuhliswa kweempawu zangaphakathi, ukuqonda kunye nokujongana neminqweno esebenza ngohlobo iminqweno eyanyanzela inyama ukuba isebenze. Isibhengezo njengezenzo ezinje kumzimba okwimo efanelana neyokwenyama, kodwa le fomu yaziwa ngokuba iyintoni na ngokobunjani kunye nenqanaba lomnqweno wayo, kwaye yaziwa kubo bonke abanokusebenza ngobukrelekrele kwiinqwelomoya ze-astral. Oko kukuthi, njengoko nawuphina umntu okrelekrele enokuthi axelele ubuhlanga kunye nenqanaba kunye nenqanaba lenkcubeko yayo nayiphi na indoda eyokwenyama, ke nasiphi na isithethi sinokuzazi indalo kunye nesiqu salo naliphi na elinye udwebi anokuhlangana nalo kwihlabathi-lomnqweno. Kodwa ngelixa umntu ophila ngokwasemhlabeni enokukhohlisa enye indoda ngokwasemhlabeni, ngokobuhlanga kunye nesikhundla sakhe, akukho mntu okwindlela yehlabathi-lomnqweno onokuthi akhohlise isihlonipho malunga nobume bakhe kunye nenqanaba. Kubomi bokwenyani umzimba ophathekayo ubanjelwe ngokungagungqiyo ngohlobo olunika imilo, kwaye lo mbandela wenyama ukwimo uphenjelelwa ukuba usebenze. Kwindoda yokwenyama ifom yahlukile kwaye ichazwe, kodwa umnqweno awunjalo. Isimangalo ngumntu owakhe umzimba wokunqwenela, owomzimba womnqweno osenokusebenza ngokusebenza kwifomu yakhe ye-astral okanye eyedwa njengeziko lomnqweno, athe wanika ifom kuyo. Indoda eqhelekileyo yehlabathi elibonakalayo inomnqweno omninzi, kodwa lo mnqweno ungamandla angaboni. Isimamva sibumba amandla omntu ongaboniyo ukuba abe yimilo, engasabonakaliyo, kodwa eneempawu ezihambelana nezo zomzimba, ezisebenza ngomzimba wenyama. Isithethi, ke, umntu ofumene ukusetyenziswa kunye nokusebenza kweminqweno yakhe kwimo yomzimba ngaphandle okanye nokuzimela komzimba wenyama. Isithuba okanye ilizwe apho isenzi esinjengemisebenzi enjalo sisimo se-astral okanye se-psychic yefom, kwiplanethi ye-virgo-scorpio (♍︎-♏︎), ifomathi-yomnqweno, kodwa wenza oko ukusuka kwinqanaba le-scorpio (♏︎). Isimamva sifikelele kwisenzo esipheleleyo somnqweno. Isimangalo esinjalo ngumzimba weminqweno ebambekayo kwifom ehlukileyo kwenyama. Iimpawu zesithethi kukuba ujongene nezinto ezifana nokuveliswa kweefom, ukutshintsha kweefom, ukubizwa kweefom, ukunyanzeliswa ukusebenza kweefom, zonke ezo zilawulwa ngamandla eminqweno, njengoko esenza izinto ukusuka kwiminqweno kwiifom kunye nezinto zelizwe lehlabathi.
Inkosi ngumntu ohambelana kwaye ulungelelanise imeko yesini yomzimba wenyama, oye wahlula iminqweno yakhe kunye nomba wefom yomhlaba, kwaye olawulayo kwaye uyalela umba wobomi behlabathi kwiplanethi ye-leo-sagittary (♌︎ -♐︎) ukusuka kwisikhundla sakhe kunye namandla eengcinga, i-sagittary (♐︎). Isimangalo ngumntu othi, ngamandla eminqweno, afumane isenzo ngokukhululekileyo kumnqweno wehlabathi-lomnqweno, owahlukileyo ngaphandle komzimba wenyama. Inkosi ngulowo ulungelelanise inkanuko yomzimba, amandla omnqweno, onamandla okulawula imijikelezo yobomi, kwaye ngubani oku ukwenze ngamandla okucinga ekwindawo yakhe kwimo yengqondo yeengcinga. Uyinkosi yobomi kwaye uguqule umzimba wengcinga kwaye unokuphila kulo mzimba wengcinga ucacile kwaye ukhululekile kumnqweno wakhe womzimba kunye nomzimba wenyama, nangona unokuhlala ngaphakathi okanye enze isenzo okanye zombini. Indoda yenyama isebenza ngezinto, inkangeleko ijongana neminqweno, inkosi iphatha ngengcinga. Umntu ngamnye wenza into yakhe. Umntu wenyama unemizwa emtsala iye kwizinto zelizwe, i-adept ihambise umdiza wakhe wokusebenza kodwa isenazo iimvakalelo ezihambelana nezo zezokwenyama; kodwa inkosi yoyisile kwaye yaphakama ngaphezulu kokubini kwiimpawu zobomi ezivela kuzo iimvakalelo kunye neminqweno kunye nezinto zayo ngokwasemzimbeni zibonisa nje. Njengoko izinto zisenyameni kwaye neminqweno ikwimo yehlabathi, kunjalo iingcinga zikwindlela yobomi behlabathi. Iimbono zikwindawo yokucinga yengqondo ukuba yeyiphi iminqweno ekwimo yehlabathi kunye nezinto kwinto yomzimba. Njengomzobi obona iminqweno kunye neefom ezingabonakaliyo kwinyama yenyama, ke ngoko inkosi iyabona, kwaye isebenza ngeengcinga kunye neenjongo ezingabonwa sisithunzi, kodwa esinokuthi sibanjiwe sisigqibo ngokufanayo nendlela umntu yenyama abona ngayo umnqweno. nefom engengokwasemzimbeni. Njengoko umnqweno ungahlukanga ngendlela ekwimo yomzimba, kodwa kunjalo nakwi-adept, ngoko ke kwingcamango yesigqibo ayihlukile, kodwa ucinga ngumzimba owahlukileyo wenkosi. Njengoko i-adept inomyalelo ogcweleyo kunye nokusebenza komnqweno ngaphandle kwento yomzimba umntu angenayo, ngoko inkosi inesenzo esipheleleyo kunye nenkululeko kunye namandla okucinga emzimbeni wento engafakwanga. Iimpawu zenkosi kukuba ujongene nobomi kunye neenjongo zobomi. Uyalathisa kwaye alawule imisinga yobomi ngokweempawu. Wenza ngokufana nobomi njengenkosi yobomi, emzimbeni wengcinga nangamandla okucinga.
I-mahatma ngumntu ohlule, ukhule ngaphandle, waphila kwaye wakhula ngaphezu kwehlabathi lesondo lendoda yenyama, ilizwe-lomnqweno wehlabathi lesenzo, ilizwe elacinga ngobomi benkosi kwaye isebenza ngokukhululekileyo kwilizwe lomphefumlo womoya Njengomntu owazi ngokupheleleyo kwaye ongafiyo, onelungelo lokukhululwa ngokupheleleyo kwaye ngaphandle okanye nokunxulumana kunye okanye nokwenza into ngomzimba wokucinga, umzimba womnqweno kunye nomzimba wenyama. Imafama kukugqibelela kunye nokugqitywa kwendaleko. Ukuphefumla ibisisiqalo sokudalwa kwezinto zehlabathi ezibonisiweyo kwimfundo kunye nemfezeko yengqondo. Ubuntu kukuphela kwendalo kunye nokugqibelela kwengqondo. I-mahatma luphuculo olupheleleyo kwaye lupheleleyo lobuqu okanye ingqondo, ephawula ukuphela kunye nokufezekiswa kwendaleko.
I-mahatma yingqondo yomntu ngamnye engenasidingo sokunxibelelana ngakumbi nalo naliphi na ilizwe eliphantsi kunehlabathi lokomoya. Imazma isebenza ngomphefumlo ngokomthetho wazo zonke izinto eziphefumlayo zivela kwindalo engadalwanga, ngazo zonke izinto eziphefumlelweyo ziphinde ziphefumlelwe kwakhona zingabonakali. Imayma isebenza malunga nemibono, ubungqina bokwenene obungenasiphelo, ubunyani beembono, kwaye ngokwendlela avela ngayo umhlaba onovakalayo kwaye unyamalale. Njengezinto kunye nokwabelana ngesondo kwihlabathi elibonakalayo, kunye neemvakalelo kwilizwe lomnqweno, kunye neembono zelizwe lokucinga, kubangela isenzo sabantu kulomhlaba, zinjalo izimvo nemithetho engapheliyo emele ukwenziwa ngalo kwaye mahatmas isebenze ngokomoya. Umhlaba wokuphefumla.
Isimangalo asikhululekanga ekuphindukuzalwa kwakhona ngenxa yokuba ungazange woyise umnqweno kwaye akakhululwa kwi-virgo kunye ne-scorpio. Inkosi yoyisile umnqweno, kodwa ayinakho ukukhululeka kwimfuneko yokuphindukuzalwa ngenxa yokuba umzimba wayo inomnqweno kwaye isenokuba ayisebenzi yonke ikarma enxulumene neengcinga zakhe zangaphambili kunye nezenzo, kwaye apho ingenakwenzeka Ukuba asebenze emzimbeni wakhe wangoku yonke ikarma ayizisileyo, kuya kuba yimfanelo kuye ukuphinda azalwe ngokutsha ngemizimba emininzi kunye neemeko ezithile njengoko kuya kuba yimfuneko ukuba ayifeze ngokupheleleyo ikarma yakhe emthethweni. I-mahatma yahlukile kwi-adept kunye ne-master kwinto yokuba i-adimbo kufuneka iphinde ivele emzimbeni ngenxa yokuba isenza ikarma, kwaye inkosi kufuneka iphinde yenzeke ngenxa yokuba, nangona isenza ikarma, isebenzela oko sele ikwenzile, kodwa mahatma, ekubeni iphelile ukwenza ikarma kwaye isebenze kuyo yonke ikarma, ikhululwe ngokupheleleyo kuyo nayiphi na imfuneko yokuphindukuzalwa kwakhona. Intsingiselo yegama mahatma iyenza icace lento. Ma ubonakalisa imana, ingqondo. Ma yintloko yengqondo okanye yengqondo, ngelixa i-mahat iyimbono yengqondo yendalo iphela. Ma, ingqondo nganye, isebenza ngaphakathi mahat, umgaqo jikelele. Le mfundo yendalo iphela ibandakanya yonke indalo ebonisiweyo kunye nomhlaba wayo. Ma ngumbandela wengqondo ohlukileyo ngokwahlukileyo, nangona ungaphakathi kumhlaba jikelele mahat; kodwa ma kufuneka abe ngumntu ngamnye opheleleyo, ongekho ekuqaleni. Kwisiqalo ma, ingqondo, esebenza kwilizwe lokomoya lokuphefumla kumqondiso womhlaza (♋︎), ukuphefumla, kwaye kusekho de kube kugqityiwe kwaye kuphuhliswe eminye imigaqo-nkqubo eyona ndawo iphantsi yochaphazeleko ifikelelwe libra (♎︎ ), ilizwe lokwabelana ngesondo, ekuya kuthi kuthi kulo litshintshe eminye imigaqo eyimfuneko ekuphuhlisweni nasekugqibeleleni kwengqondo. Ingqondo okanye into isebenza ngaphakathi kwengqondo okanye ngengqondo yendalo iphela kuzo zonke izigaba zokubuyiselwa kwimeko yesiqhelo kunye nokuvela kwezinto ide ivele kwaye inyuke ngeplanethi, kwihlabathi liphela, kwiplanethi ekhuphuka kwi-arc ehambelana nenqwelomoya eyaqala kuyo ukwehla kwe-arc. Iqale imvelaphi yayo kumhlaza (♋︎); eyona ndawo iphantsi ifikelelweyo yi-libra (♎︎); ukusuka apho yaqala ukunyuka yaze yenyuka yaya kwiCapricorn (♑︎), okukuphela kohambo lwayo kwaye nayo inqwelomoya enye ehla kuwo. Ibingumama, ingqondo, ekuqalekeni kokuchatshazelwa ngumhlaza (♋︎); ngu-ma, ingqondo, ekupheleni kwendaleko kwi-capricorn (♑︎). Kodwa ma idlule mahat, kwaye mahat-ma. Oko kukuthi, ingqondo idlulile kuzo zonke izigaba kunye nezigaba zengqondo yendalo iphela, mahat, kwaye ekubeni nokudityaniswa kwayo kwaye kwangaxeshanye kugqitywe ubupheleleyo bayo, ke, mahatma.